ကင်းမြီးကောက် နဲ့ တူတဲ့ သားသမီးတွေ ဘဝဆက်တိုင်း မဖြစ်ကြပါစေနဲ့ – Amara News
ကင်းမြီးကောက် နဲ့ တူတဲ့ သားသမီးတွေ ဘဝဆက်တိုင်း မဖြစ်ကြပါစေနဲ့
ကင်းမြီးကောက်ပမာ သားသမီးတွေ မဖြစ်ပါစေနဲ့ … ကင်းမြီးကောက် မိခင်တွေရဲ့ သဘော သဘာဝ က ကလေးပေါက်ဖွားပြီးတဲ့နောက်မှာ မိမိ ကလေးတွေကို မိမိ ခန္ဓာကိုယ်မှာ
တက်ခိုင်းထားတာပါပဲ…. ကင်းမြီးကောက် အပေါက်လေးတွေဟာ ကင်းမြီးကောက် မိခင်ကြီးရဲ့ ကိုယ်မှာ နေရင်းနဲ့ ကင်းမြီးကောက်မိခင်ရဲ့ ကိုယ်က အသားတွေကိုပါ တဖြေးဖြေး စားလိုက်
သူတို့ အမေလည်းသေရော သူတို့လေးတွေ လည်း ကြီးလာ ရောပေါ့.. သူတို့ကိုယ်တိုင် လည်း သွားနိုင် လာနိုင်ရုံမက ရှာဖွေ စားသောက် နိုင်နေပြီပေါ့… ‌ဘယ်လောက်ထိ
ကင်းမြီးကောက်မကြီးရဲ့ ကိုယ်က အသားတွေကို စားလည်းဆိုရင် ကင်းမြီးကောက်မကြီး သေဆုံးသွားတဲ့ အထိပေါ့.. ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခြေအနေကလည်း
အဲ့ကင်းမြီးကောက်ပေါက်လေး တွေလို ဖြစ်နေတယ်… မိဘဖြစ်သူက ဘဝတလျှောက်လုံး ကိုယ့် သားတွေ သမီးတွေအတွက် မိမိဘဝကို သွေး ချွေးရင်းပြီး ပြုစုပျိုးထောင် ကြတယ်… ဒါပေမယ့်
သားတွေ သမီးတွေ ကြီးလာတဲ့ အခါ ကိုယ်စီကိုယ်စီ အိမ်ထောင်ပြု လိုက်ကြတယ်… အဲ့အချိန် မိဘ‌တွေက အိုနေပြီလေ….
ထိုအခါ တချို့ သားသမီးတွေက မိဘတွေကို ပြောကြ သေးတယ်.. အမေတို့ အသုံးမကျလို့ အဖေတို့ အသုံးမကျ လို့ ကျနော် ကျမတို့ဘဝ ဒီလိုဖြစ်နေတာတဲ့.. သနားစရာ
အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့ မိဘတွေ ကို ပြန်လည်မစောင့်ရှောက်တဲ့အပြင် ပြစ်ထားလိုက်ကြတယ်.. အဲ့လို သားသမီးတွေဟာ ကင်းမြီး‌ကောက်တွေ နဲ့ ပမာတူညီပါတယ်..
ကငျးမွီးကောကျ နဲ့ တူတဲ့ သားသမီးတှေ ဘဝဆကျတိုငျး မဖွဈကွပါစနေဲ့
ကငျးမွီးကောကျပမာ သားသမီးတှေ မဖွဈပါစနေဲ့ … ကငျးမွီးကောကျ မိခငျတှရေဲ့ သဘော သဘာဝ က ကလေးပေါကျဖှားပွီးတဲ့နောကျမှာ မိမိ ကလေးတှကေို မိမိ ခန်ဓာကိုယျမှာ
တကျခိုငျးထားတာပါပဲ…. ကငျးမွီးကောကျ အပေါကျလေးတှဟော ကငျးမွီးကောကျ မိခငျကွီးရဲ့ ကိုယျမှာ နရေငျးနဲ့ ကငျးမွီးကောကျမိခငျရဲ့ ကိုယျက အသားတှကေိုပါ တဖွေးဖွေး စားလိုကျ ကွတယျ..
သူတို့ အမလေညျးသရေော သူတို့လေးတှေ လညျး ကွီးလာ ရောပေါ့.. သူတို့ကိုယျတိုငျ လညျး သှားနိုငျ လာနိုငျရုံမက ရှာဖှေ စားသောကျ နိုငျနပွေီပေါ့… ‌ဘယျလောကျထိ ကငျးမွီးကောကျမကွီးရဲ့ ကိုယျက အသားတှကေို စားလညျးဆိုရငျ ကငျးမွီးကောကျမကွီး သဆေုံးသှားတဲ့ အထိပေါ့.. ယနေ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အခွအေနကေလညျး
အဲ့ကငျးမွီးကောကျပေါကျလေး တှလေို ဖွဈနတေယျ… မိဘဖွဈသူက ဘဝတလြှောကျလုံး ကိုယျ့ သားတှေ သမီးတှအေတှကျ မိမိဘဝကို သှေး ခြှေးရငျးပွီး ပွုစုပြိုးထောငျ ကွတယျ… ဒါပမေယျ့ သားတှေ သမီးတှေ ကွီးလာတဲ့ အခါ ကိုယျစီကိုယျစီ အိမျထောငျပွု လိုကျကွတယျ… အဲ့အခြိနျ မိဘ‌တှကေ အိုနပွေီလေ….
ထိုအခါ တခြို့ သားသမီးတှကေ မိဘတှကေို ပွောကွ သေးတယျ.. အမတေို့ အသုံးမကလြို့ အဖတေို့ အသုံးမကြ လို့ ကနြျော ကမြတို့ဘဝ ဒီလိုဖွဈနတောတဲ့.. သနားစရာ အသကျရှယျကွီးလာတဲ့ မိဘတှေ ကို ပွနျလညျမစောငျ့ရှောကျတဲ့အပွငျ ပွဈထားလိုကျကွတယျ.. အဲ့လို သားသမီးတှဟော ကငျးမွီး‌ကောကျတှေ နဲ့ ပမာတူညီပါတယျ..
Previous Article သငျ့ကို အကပျြအတညျး အမြိုးမြိုး မှ လှတျမွောကျစနေိုငျမညျ့ အဓိဌာနျဝငျနညျး
Next Article အရိမေတ္တေယျ ဘုရားရှင် အားဖူးတွေ့ လိုလျှင် လုပ် ရ မည့် ”ကုသိုလ် (၁၀) မျိုး”